Talo iyo Taageero Daawooyinka Iska-joojinta Lacag la’aanta ah
Adigoo keliya isdiiwaangeliya, waxaad heli kartaa daawooyinka iska joojinta oo lacag la’aan ah oo ay la socoto hagista iska joojinta ee la habeeyey. Waxaad kala dooran kartaa sharootada nikotiinka, xanjo ama lozenges-yada. * Kuwaasi waxaa sidoo kale loo yaqaanaa daaweynta beddelka nikotiinka (NRT). Waa kuwan macluumaad yar oo ku saabsan mid kasta si aad u awoodo inaad sameyso doorashada kugu habboon adiga.
Laba jibaar fursadahaaga iska joojinta adigoo iskudaya laba shay isku mar: la hadlida tababare iyo isticmaalida sharootada nikotiinka, xanjo ama lozenges-yada.
Wax Dheeraad Ah Ka Baro Waxyaalaha Aan Bixino
Nacnaca Lozenge-yada Nikotiinka
Ku saabsan Daawadaan
Talooyin Sida-loo isticmaalo Oo Waxtar Leh
Wada hadal Live-ah ama wac 1-800-QUIT-NOW si aad la xiriirto tababare iska joojinta si aad wax dheeraad ah u barato.